Dabaaldegyo Farxad Leh Iyadoo Seychelles Hadda Ka Gudubtay Soo -booqdaha 2020
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dabaaldegyo Farxad Leh Iyadoo Seychelles Hadda Ka Gudubtay Soo -booqdaha 2020
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Seychelles waxay u dabaaldegtaa soo -booqdaha soo -booqdaha
Si fiican u soo kabashada tan iyo go'aankii geesinimada lahaa ee ahaa in la bilaabo wajigii ugu dambeeyay ee dib -u -furitaankiisa bishii Maarj 2021, suuqa jasiiradaha Badweynta Hindiya weli waa guul kale oo ah booqashadii 114,859 -aad oo soo galay qorraxda Seychelles oo ka soo duushay duulimaadkii Qatar Airways QR 678, oo soo degtay 7:40 subaxnimo Isniintii, Oktoobar 11 -keedii, oo si rasmi ah u dhaaftay tirada guud ee booqdayaasha la diiwaangeliyay sannadka 2020.
Rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa lagu soo dhoweeyay qoob -ka -ciyaarka maxalliga ah iyo muusigga dhaqanka ee garoonka caalamiga ah ee Seychelles.
Waaxda Dalxiiska ayaa gacanta ku haysay inay bixiso hadiyado mahadnaq ah oo calaamad u ah mahadnaqa.
Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska Marwo Sherin Francis ayaa ka sheegtay gegida dayuuradaha in meel kasta oo muhiim ah ay u baahan tahay dabaaldeg.
233 rakaab ah iyo shaqaalihii QR 678 ayaa ka soo degay gagida dayuuradaha caalamiga ah ee Seychelles ee Pointe Larue si ay u arkaan qoob -ka -cayaarayaasha maxalliga ah oo u garaacaya dhawaaqa muusikada dhaqanka iyada oo meeshii loo socday ay u dabbaaldegtay weli guul kale oo ka mid ah waxqabadka dalxiiska.
Waxay kaloo ka heleen calaamad mahadnaq ah Waaxda Dalxiiska iyada oo calaamad u ah mahadnaqa qiimeynta jasiiradda yar ee loo socdo.
Gegida dayuuradaha si loogu soo dhaweeyo martida looguna xuso guushaan Xoghayaha Xoghayaha Dalxiiska ee Seychelles, Mrs. Sherin Francis, ayaa tiri:
“Marka la eego sannadka adag ee warshadaha socdaalku wajahay; marxalad kasta waxay ku baaqeysaa dabaaldeg. Maanta, waxaan ku calaamadinaynaa guushaan muhiimka ah mahadnaq. Kaliya laba toddobaad ka hor ayaan soo dhoweynay booqashadeena 100,000th ee sanadka. Lambarka 118, 859 maanta waa tiro muhiim ah maadaama ay muujineyso in Seychelles ay weli tahay meesha ay doorbidaan martida. Tirada ayaa sidoo kale ah a marag u ah xamaasadda iyo dadaalka shaqada ay xafiisyadeennu qabteen adduunka oo dhan, shuraakadayada warshadaha iyo dhammaan Seychelles oo gacan ka geysanaya dib -u -bilaabidda tiirka dhaqaalaheena. Waa maalin lagu faano meesha aan u soconno, maadaama aan sameynay 10 bilood oo keliya wixii aan u qaadannay inay yihiin xaaladdii ugu darnayd ee istaraatiijiyadeena soo kabashada. ”
Istaraatiijiyad kala -duwanaansho firfircoon kadib burburkii warshadaha dalxiiska ka dib bilowgii COVID wuxuu arkay koror joogto ah tirada imaatinka Seychelles suuqyada quudinta ugu sarreeya hadda oo ay ku jiraan Russia, Imaaraadka Carabta (UAE), Israel, Germany, France iyo Switzerland.
Iyada oo Seychelles ay hadda ku jirto liiska safarka la oggolaaday ee UK iyo sidoo kale Talyaaniga, dib-u-bilaabista duulimaadyada Condor iyo Air France dabayaaqadii Oktoobar, dalxiisayaasha maxalliga ah iyo hawlwadeennada soo-dhoweynta ayaa filaya waqtiyo ka wanaagsan ka hor xilliga nuska iyo xilliga fasaxa jiilaalka suuqyada ilaha booqdaha dhaqameedka ee Yurub waxay ku biiraan qalabka.
Isagoo isku xiraya soo-kabashadiisa dhaqaale barnaamij tallaal oo dalka oo dhan ah, borotokoollada caafimaadka dadweynaha iyo sidoo kale tababar adag oo badbaadinta COVID iyo shahaadooyinka meheradaha, dalxiiska iyo hawl-wadeennada soo-dhoweynta, Seychelles waxay ka mid ahayd meelihii ugu horreeyay ee si buuxda dib loogu furo soohdimihiisii ​​booqdayaasha bishii Maarso 2021 , istaraatiijiyad si cad u bixinaysa dalka dalxiiska u yahay tiirka ugu weyn ee dhaqaalaha.